၁ ။ လိမ္မော်သီး ( Orange ) = (2numbers ) ၂ လုံး
၂ ။ စတော်ဘယ်ရီသီး ( Strawberry ) = (5numbers ) ၅ လုံး
၃ ။ ပန်းသီးစိမ်း ( Green Apple ) = ( 1 number ) ၁ လုံး
၄ ။ ခရမ်းချဉ်သီး ( Tomato ) = ( 1 number ) ၁ လုံး
၅ ။ သခွားသီး ( Cucumber ) = ( ½ number ) ၀.၅ လုံး
၆ ။ မုန်လာဥနီ ( Carrot ) = ( ½ number ) ၀.၅ လုံး
၇ ။ ငရုပ်ပွဝါ ( Yellow Bell Pepper ) = ( ¼ number ) ၀.၂၅ လုံး
၈ ။ ငရုပ်ပွစိမ်း ( Green Bell Pepper ) = ( ¼ number ) ၀.၂၅ လုံး
၉ ။ ငရုပ်ပွနီ ( Red Bell Pepper ) = ( ¼ number ) ၀. ၂၅ လုံး
၁၀ ။ သံပုရာသီး ( Lime ) = ( 1 number ) ၁ လုံး
၁၁ ။ ပူဒီနာရွက် ( Fresh Mint Leaves ) = (alittle ) အနည်းငယ်
၁၂ ။ ဆလပ်ရွက်စ်ိမ်း ( Green Oak Lettuce ) = (alittle ) အနည်းငယ်
၁၃ ။ ဆလပ်ရွက်နီ ( Red Oak Lettuce ) = (alittle ) အနည်းငယ်
၁၄ ။ ဆား ( Salt ) = ( ½ tsp ) ၀.၅ လ္ဘက်စွန်း
၁၅ ။ ငရုပ်ကောင်းမှုန့်( Crushed Pepper ) = (apinch ) အနည်းငယ်
၁၆ ။ ပဲငံပြာရည် ( Light Soya Sauce ) = ( 1 tsp ) ၁ လ္ဘက်စွန်း
၁၇ ။ ပျားရည် ( Honey ) = ( 1 tbsp ) ၁ စွန်း
၁၈ ။ နှမ်းဆီမွှေး ( Sesame Oil ) = ( 1 tbsp ) ၁ စွန်း
၁၉ ။ ဖရုံစေ့လှော် ( Roasted Pumpkin Seed ) = ( 1 tbsp ) ၁ စွန်း
၁ ။ လိမ္မော်သီး ၊ စတော်ဘယ်ရီသီး နှင့် ခရမ်းချဉ်သီး တို့ ကို လှီးပြီး ရေခဲသေတ္တာတွင်အအေးခံထားပါ ။
( Peel the Orange and cut into cubes and do the same with Strawberry & Tomato , then chilled inside the fridge forawhile . )
၂ ။ ပန်းသီးစိမ်း ၊ သခွားသီး ၊ မုန်လာဥနီ ၊ ငရုပ်ပွဝါ ၊ ငရုပ်ပွစိမ်း ၊ ငရုပ်ပွနီ နှင့် ပူဒီနာရွက် တို့ ကိုလှီးပြီး ရေခဲရေစိမ်ထားရျွ် ၊ ဆလပ်ရွက်စိမ်း ၊ ဆလပ်ရွက်နီ တို့ ကိုလည်း သန့် စင်ပြီး ရေခဲရေစိမ်ထားပါ ။
( Cut and soak Green Apple , Cucumber , Carrot , Yellow Bell Pepper , Green Bell Pepper , Red Bell Pepper and Mint Leaves in Iced Water and also soak Green Oak Lettuce , Red Oak Lettuce in Iced Water separately . )
၃ ။ သံပုရာရည် ၊ လိမ္မော်ရည် ၊ ဆား ၊ ငရုပ်ကောင်းမှုန့် ၊ ပဲငံပြာရည် ၊ ပျားရည် ၊ နှမ်းဆီမွှေး တို့ ကိုသမအောင်ရော်မွှေပြီး အချဉ် စပ်ထားပါ ။
( Made Salad Dressing with Lime Juice, Orange Juice , Salt , Crushed Pepper , Light Soya Sauce , Honey , Sesame Oil and put aside. )
၄ ။ ရေခဲသေတ္တာတွင်အအေးခံထားသော သစ်သီးများ နှင့် ရေခဲရေစိမ်ထားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်စုံ တို့ ကိုရေစစ်ပြီး အသင့် စပ်ထားသော အချဉ် နှင့် ရောမွှေရျွ် ဆလပ်ရွက်စ်ိမ်း ၊ ဆလပ်ရွက်နီ တို့ ခင်းပြီး ဖရုံစေ့လှော် အနည်းငယ်ဖြူးရျွ် တည်ခင်းပါ.။
( Drain the Vegetables and Mix together with Chilled fruits and Dressing , then serve on the bed of Green & Red Oak Lettuce with some Roasted Pumpkin Seed on top. )